ထိုင်း ဒုဝန်ကြီးချုပ် ဆုန်ကစ် / Thai PBS
ထိုင်းခရီးသွားလုပ်ငန်း အာဏာပိုင်အဖွဲ့က ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားဧည့်သည် ရောက်ရှိမှု နှင့် ပတ်သက်၍ ၁၁. ၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာမည်ဟု လျာထားသော်လည်း တရုတ်ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်နိုင် ခြင်း မရှိ၍ လာမည့်နှစ်အတွက် ခရီးသွား အခွန် ဘတ်ငွေ ၅၀ ဘီလီယံ ဆုံးရှုံးဖွယ်ရာ ရှိနေကြောင်း Thai BPS သတင်းကဆိုသည်။
ယခုနှစ်အတွက် ခရီးသွားဧည့်သည် ၃၈ သန်းမှ ၃၈. ၂ သန်းအတွင်း လာရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထား ခဲ့ပြီး ယမန်နှစ်ကထက် ၇ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၈ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာမည်ဟု စီမံချက်ဆွဲထားပြီး၊ အခွန်ငွေကို လည်း ဘတ်ငွေ ၂ ထရီလီယံမှ ၂. ၀၁ ထရီလီယံ အထိ လျာထားခဲ့ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၈ ရာခိုင် နှုန်းမှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းတက်လာ မည်ဟု တွက်ချက်ထားခဲ့ ကြောင်း ထိုင်းခရီးသွားလုပ်ငန်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ယွတ်သာဆတ် ဆူပစွန်၏ အဆိုအရ သိရသည်။
ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ထိုင်းအစိုးရသည် ယခုနှစ်တနှစ်လုံးအတွက် ခရီးသွားလာမှု ပေါင်း ၁၆၇. ၂ သန်းဟု စီမံချက်ဆွဲထားခဲ့ရာ ယမန်နှစ်က အခွန်ထက် ၄ ရာခိုင်နှုန်းတိုး၍ ဘတ်ငွေ ၁. ၀၇ ထရီလီယံဟု မှန်းခဲ့သည်။
အကယ်၍ တရုတ်နိုင်ငံမှ ခရီးသွားလာမှု အလျင်အမြန် တိုးတက်လာခြင်းမရှိလျှင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အခွန်မှာ ဘတ်ငွေ ၃. ၄ ထရီလီယံ လျာထားရာမှ ၁၁. ၅ ရာခိုင်နှုန်း ဆုံးရှုံးဖွယ်ရှိကြောင်း၊ ယခုနှစ် အတွက် တိုးလာသည့်နှုန်းမှာ ၁၀. ၄ ရာခိုင်နှုန်း သာ ရှိသေးကြောင်း ယွတ်သာဆတ်က ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လက ဖူးခက်ကျွန်းတွင် တရုတ်ခရီးသည် ၄၀ ထက်မနည်းမှာ စက်လှေမတော်တဆ တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်စဉ်နှင့် သုဝဏ္ဍဘူမိလေဆိပ်တွင် တရုတ်ခရီးသည် တဦးကို ထိုင်းလုံခြုံရေးက မချေမငံဆက်ဆံမှုကြောင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များက ထိုင်းကို သပိတ်မှောက်ကန့်ကွက်ထားသည်။
အင်္ဂါနေ့တွင် ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဆုန်ကစ် ဂျာတုဆရီပီတပ်ခ် ဦးစီး၍ လာမည့်နှစ်သစ်အထိ ယခုနောက်ဆုံး ၃ လပတ် ခရီးသွားအထူးမြှင့်တင်ရေးအစည်းအဝေးကို အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ယွက်သာဆတ်က ပြောသည်။
အဆိုပါ ခရီးသွားလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေးစီမံချက်တွင် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာများအတွက် အခကြေးငွေ လျော့ပေါ့ပေးသည့် ကိစ္စလည်း ပါဝင်သည်။